18 तपाईंले गलत काम गर्नुभएका कुराहरू
तपाईं पहिले यो कसरी लाइभ गर्नुभयो?
1. प्रायजसो, तपाईले यो छोटो छोटो, तर धेरै महत्त्वपूर्ण विवरणलाई बेवास्ता गर्नुभयो।
एल्युमीनियम पन्नीको साथमा धेरै बाकसहरू दुवै पक्षमा सानो तहका तत्वहरू छन्, जसमा थिच्नका लागी तपाईं अब यसलाई चिन्ता गर्न सक्नुहुन्न कि एक पन्नी पन्जा बक्स बाहिर पस्नेछ जब तपाइँ एक पटक फेरि केहि स्वादिष्ट तयारी गर्दै हुनुहुन्छ।
2. आफ्नो जीवन जटिल नगर्नुहोस्।
के तपाईं ट्याक्सी-टाक बक्सलाई हिँड्नु हुन्छ जब तपाईं कैंडी लिन चाहानुहुन्छ? सहमत हुनुहोस्, अक्सर परिणाम नराम्रो छ - तपाईंको हातको खण्डमा वा केहि पनि छैन। बस ढोका ढोकामा एक सानो "बक्स" मा आरामपूर्वक बस्न र .. Voila! नतिजा लिनुहोस्!
3. बलियो तयारी सफल प्रशिक्षणको लागि कुञ्जी हो।
दृढतापूर्वक तपाईंको पैदलमा स्नीकर ठीक गर्न, तपाईंले धेरै सरल कार्यहरू गर्नु पर्छ:
स्नकरको दुवै बाहिरी पक्षमा हिङ्गहरू सिर्जना गर्नुहोस्;
छायाहरू पार गर्नुहोस्;
तिनीहरूमध्ये प्रत्येकमा लूप राख्नुहोस्;
हल्लाहरू यथासंभव सानो भएन कि लोभहरूलाई यस्तो हद सम्म धम्की दिनुहोस्;
एक स्ट्रिंग टाई गर्नुहोस्, तपाई सामान्यतया गर्नुहुन्छ।
यसले लोडको बावजूद जूताको आरामदायक पहाइलाई सुनिश्चित गर्नेछ।
"काशी थोरै बचपनमा खाए!"
एक ककड़ी लेयो, र ढक्कन खोलिएको छैन? कति प्रयास खर्च हुन्छ, र परिणाम शून्य छ: हातमा कुश्तीमा जारसँग प्रतिस्पर्धा नगर्नुहोस्! यसलाई उल्टो पार्नुहोस् र तालिकाको सतहमा हल्का रूपमा ट्याप गर्नुहोस्। अब आफ्नो मूल स्थितिमा फर्कन र ढक्कन खोल्नुहोस्। यो खुला छ! अरू कसैले तपाईंलाई बताउनेछ कि तपाईंले बच्चाको रूपमा सानो दलिया खाउनुभयो!
एक पटक - एक प्याच, दुई - एक प्याच ...
के तपाईंले कहिल्यै सोचेको छ: "ऊ टिचीको सानो टुक्राको लागि के हो?" वास्तवमा, सबै कुरा अत्यन्तै सरल छ, र यो कपडा निर्माताको पनि ठगी पनि होइन। यी साना टुक्राहरू डिजाइन गर्नका लागि डिजाइन गरिएको छ कि तपाईंले अग्रिम जान्नुहुने उत्पादन कसरी धोनेको बेला व्यवहार गर्दछ: चाहे त्यो उकालो हुन्छ, विस्तार ... अब सबै कुरा स्पष्ट छ!
6. त्यसैले तपाइँ स्पागेटी को लागि एक चम्मच मा एक छेद को आवश्यकता छ!
म शर्त छ, यो सबै समय तपाईले सोचे कि स्पेगेटी को लागि एक चम्मच पानी को हटाउन को लागि र उनलाई पैन देखि बाहिर निकालन को लागि आवश्यक छ। वास्तवमा, यो स्पेगेटी प्रति व्यक्तिको मात्रा मापन गर्न सक्षम हुनुको उद्देश्य हो। कतिवटा स्पैग्टी छेदमा फिट हुन्छ, यो तपाईंको सेवा गरिरहेको छ।
7. "धुलाई वा नबनाइने?" - यो प्रश्न हो।
सम्भवतः, सबैले भन्नेछन् कि मेट्जरको नीलो भाग ह्यान्डेट मेटाउन डिजाइन गरिएको छ। वास्तवमा - मोटो कागजको साथ पेंसिलको लागि। रातो भाग यो अवांछनीय निशान छोडिनेछ।
8. त्यहाँ धेरै टाँस्ने छ?
आफ्नो दाँत को सफाई को लागि, बस को रूप मा खुशी को लागि, एक सानो छ आवश्यक छ: यो सबै भन्दा राम्रो ब्रश मा पेस्ट बाहिर निस्कन आवश्यक छैन किनकि यो सुन्दर देखिन्छ। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, ब्रशको टिपमा पर्याप्त दांतपट्टि (माई को बारेमा) प्रभावी रूपमा दाँत सफा गर्न पर्याप्त छ।
9. आधा छ - परिणाम पाउनुहोस्।
प्रायः चौंरी प्रयोग गरेर दही टिपेर बिस्तारै बिर्सने वा सिपाउने संभावनाहरू निकै सानो छन्। बस सोच्नुहोस्, यदि तपाईँले तह लाइनको साथ जार झुन्ड्याउनु हुन्छ भने दही बलहरू वा जाम दहीमा सही हुनेछ।
10. सायद यो सबै समय तपाईंले शौचालय सीटमा गलत डिस्पोजेबल नैपकिन प्रयोग गर्नुभयो।
मुख्य कुरा शौचालय सीटमा स्वच्छ तरिकाले स्वच्छ ठाउँ राख्न र तपाईलाई सफाई संग प्रदान गरिएको छ।
सोडा खोलिसकेपछि, जिब्रोलाई आफ्नो मौलिक स्थितिमा राख्नुहोस्, प्वालमा स्ट्रा घुसाउनुहोस्, र तपाइँलाई पक्का हुन सक्नुहुनेछ, ग्यासहरूको ठूलो मात्रा बावजुद, स्ट्रा स्थिर हुनेछ।
12. सुरक्षित रूपमा विस्तार जडान गर्न एक सिद्ध तरिका हो।
विच्छेदनबाट बच्नको लागि पाशमा टाँस्नुहोस्। प्राथमिक, वाटसन!
13. लुगा लगाई "सुई संग।"
पतलून प्यान्ट माथि बटनहोल मा बेल्ट बकसुआ को जिब पुश गर्नुहोस् र यसलाई सामान्य रूपमा छिटो पार्नुहोस्। यसले बेल्टलाई "बाँया र दायाँ" हिँड्न र यसलाई सही स्थितिमा समाधान गर्न अनुमति दिन्छ। एक वैकल्पिक, तर उपयोगी चीज।
14. बक्सहरूमा केसको बारेमा के हो?
दुवै कोनों को लागि खींचो - र यसलाई सहज राख्नुहोस्, र जोस खानु हुँदैन।
15. अब तिनीहरू निश्चित हुँदैनन्!
हेडफोन्स बलियो रूपमा बलियो गर्न एक सजिलो तरिका हो - तिनीहरूलाई वरिपरि घुम्नुहोस् ताकि तार कानको छेउमा पर्दछ। प्रभाव निश्चित छ।
16. दुई फाइदा।
कुनै पनि फ्राइङ प्यानको ह्यान्डल, बर्तन वा बाल्टी एक सानो छेद हो जुन केवल यो कुकुरको बर्तनमा हुकहरूमा फाँट्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले काठको स्पाटोलाका लागि धारकको रूपमा पनि सेवा गर्न सक्छ।
17. अदृश्य अदृश्य।
यो बाहिर जान्छ कि बाल को अदृश्यता राखन को लागी अधिक दृढतापूर्वक, क्लिपहरु को एक खुट्टा को टाउको को छाला को साथ फास्ट हुनु पर्छ। अधिकांश मानिसहरूले किन विरोध गर्छन्?!
18. खडाको सट्टा प्लास्टिकको ढाँचा।
कपबाट ढक्कन प्रयोग गर्नुहोस् वा पूरकको लागि सोध्नुहोस्।
दृश्ययोग्य गन्दा: 20 चीजहरू, सृजनाकारहरू जसले हामीलाई पागल बनाउने निर्णय गरे
माथि 15 आत्महत्याको बारेमा तथ्याङ्कहरू, जसबाट तपाइँ त्यसो गर्न चाहानुहुन्छ रो, त्यसपछि हँसिलो
27 धेरै ... राम्रो, धेरै अजीब तस्वीरहरु
यो संसारमा बदसूरत केटी हुन के हो? लिज्जी वेलाउजेजको जीवनबाट 11 तथ्याङ्कहरू
15 सबै भन्दा कुख्यात धारावाहिक हत्याराहरूको
21 संकेत गर्नुहोस् कि तपाईं किशोरीको शरीरमा पेंशनर हुनुहुन्छ
26 वटा विशाल जनावरहरू जुन पृथ्वीमा बस्छन्
भविष्यमा 15 चीजहरू विद्यार्थीहरूको लागि असंभव हुनेछ
23 कारणहरू किन डरलाग्दो उमेरको 23 कारण
प्रसिद्ध कलाकारहरूको 14 वटा चित्रहरू
15 अप्रत्याशित तरिका यो वसन्त सबैभन्दा खुसी बनाउन को लागी
17 ग्राफहरू, जुन केवल परिचयहरू बुझाइनेछ
दुर्घटनाबाट प्रति मिनेट 24 प्रति मिनेट
माया, एक सपना जस्तै: हाम्रो 30 रोमनीले तपाईंलाई आँसुमा ल्याउनेछ!
असफल आईवीएफको कारण
दाल देखि काटन साधारण र स्वादिष्ट हो - हरेक दिन को लागि स्वादिष्ट व्यंजनहरु को लागि व्यञ्जनहरु!
हरियो कफी सेम
वसन्तमा सेब पेटी कसरी व्यवहार गर्ने?
कहिले कहिले मनाउनुहुन्छ?
कसरी घटाउने चर्को जलाउन सकिन्छ?
ओभेरियन सिस्ट: कारणहरु
मैले मेरो लिगामन्टहरू खिच्दा भने के गर्नु पर्छ?
बेक्ड मिर्च र एप्स
फैशनेबल महसुस भयो
विद्यालयको लागि बच्चालाई कसरी तयारी गर्ने?
कसरी विस्तार छत छान्नु हुन्छ?
आफ्नो हातले डचामा टेलिभिजन
Bree Larson र Oscar-2016
अस्टन कुचेरले प्रतिष्ठित रबर्ट डी। रे पिलर क्यारेक्टर अवार्ड प्राप्त गरे
भुइँको साथ घुमाउदै
कसरी सफा बाहिर पम्पन बनाउने?
स्नान संग स्नान कक्ष
शुरुवातका लागि फेलिंग - एक मास्टर क्लास
महिला बुना भयो स्कार्फ